Burma Partnership » Karen
Posts Tagged ‘Karen’ (72 found)
ကရင်သက္ကရာဇ် ၂၇၅၅ ခုနှစ်၊ လါးခု လပြည့်နေ့၊ ယနေ့ ဝါခေါင်လပြည့်(၁၅)ရက်၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၁၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၈) ရက်နေ့သည် ကရင်အမျိုးသား၏ ကရင့်ရိုးရာချည်ဖြူဖွဲ့ကျင်းပသောနေ့ဖြစ်ပါသည်။ ဤဝါခေါင်လ ကရင်ရိုးရာချည်ဖြူပွဲမင်္ဂလာအခါသမဝတွင် ကရင်တစ်မျိုးသားများအားလုံး ကရင်အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်အပြည့်ဖြင့် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာပြီး ဘေးရန်ခမ်သိမ်း ကင်းဝေးစေလိုကြောင်း ကေအဲန်ယူ – ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ ဆန္ဒပြုဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည် […]
August 18, 2016 • By Karen National Union • Tags: Karen, Karen National Union, Karen Wrists Tying • Read more ➤
The Karen people have suffered decades of abuse at the hands of the various forms of the Burmese dictatorship and Burmese military. We have grown up witnessing rape, murder, forced labor, destruction of villages, bombing of civilians andawide variety of other human rights abuses. We know there are those who ordered those abuses who continue to serve in the highest levels of the Government of Burma and in the Burmese military. We live this experience. We continue to seekafull investigation and the prosecution of those responsible.
December 16, 2014 • By Karen Community Based Organizations • Tags: Burma Army, Burma Government, Harvard Law School International Human Rights Clinic, Karen, Karen Community Based Organizations, Karen women's Organization, United Nations Human Rights Council, War Crimes • Read more ➤